Who were Bengali, so called Rohingya?: ရိုဟင်ဂျာပြသနာကိုကျွန်တော်တို့ ဘာကြောင့် ဆန့်ကျင်ကြတာလဲ?
ရိုဟင်ဂျာပြသနာကိုကျွန်တော်တို့ ဘာကြောင့် ဆန့်ကျင်ကြတာလဲ?
ရိုဟင်ဂျာအား မြန်မာ တိုင်းရင်းသားပြုရေး လိမ်လည်မှုပြသနာမှာ လူအချို့ဟာ လူအခွင့်အရေးဆိုတာ တစ်ခုတည်းကို လက်ကိုင်ထားပြီး ရောယောင် ထောက်ခံမှု ပြုကြတာကို တွေ့မိလို့ ဒီစာကိုရေးမိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသားရာမှာ လူမျိုး ဘာသာ ခွဲခြားရေး ရှူထောင့်ကနေ တင်ပြတာမဟုတ်ဘဲ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာကိုလဲ လက်ခံပြီး အမျိုးသားရေး (မူလနိုင်ငံသားများရဲ့အကျိုးစီးပွား) ရှူထောင့်ကနေ ရပ်တည်ရေးသားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ရိုဟင်ဂျာရဲ့ လူသားအခွင့်အရေးကို ဆန့်ကျင်နေတာ မဟုတ်ဘူး၊ သူတို့ကို မုန်းတီး နေကြတာလဲ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကိုဖိနှိပ်ဖို့ လိုလား တောင်းဆိုနေကြတာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ သွေးချင်း ရခိုင်သားတွေ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ မြေမှာ ၎င်းတို့ဟာ အုံကျင်းလိုက် ကျူးကျော် နေထိုင် ကြတယ်။ ရိုးရိုးသားသား ပြောရရင် လူမျိုးစွဲမပါဘဲ အမျိုးသားရေး စိတ်ဓါတ်အရ ကျွန်တော်တို့ ဒါကို မကျေနပ်ကြဘူး၊ ဒါပေမယ့် အဲတာကို ထားလိုက်ဦး.. မကျေနပ်လဲ ရောက်နေနှင့်ကြပြီ ဆိုတော့ သူတို့ကို လူအဖြစ်ပဲ ရှုမြင်လိုက်ပြီး လက်ခံထားလိုက်ပြီထား။
ဒါကို လူဝါးဝ ရောင့်တက်ပြီး သူတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသားပါ၊ ဘင်္ဂါလီနွယ် ဘာသာစကားပြောပြီး ဘင်္ဂါလီမဟုတ်ပါဘူး၊ အာရပ်နဲ့ ရခိုင်တွေစပ်ထားတာပါ စသည့်ဖြင့် မရိုးမသား လီဆည်နေတာတွေ သမိုင်းကိုလိမ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာတွေကို ကျုပ်တို့ မကျေနပ်ကြတာ။ အစစ်အမှန်ကနေ ကင်းကွာတဲ့ BBC သတင်းရဲ့မြေပုံမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ရိုဟင်ဂျာဒေသအဖြစ် ပုံတွေနဲ့ အခန့်သားဖေါ်ပြခြင်း ပြုလိုက်တာကို ကျွန်တော်တို့ကို ဒေါသထွက်စေပြီး ခါးခါးသီးသီး မကျေနပ်ကြတာ ဖြစ်တယ်။ (စကားချပ်။ လူမျိုးနွယ် ဆင်းသက်မှုကို ခြေရာခံရင် ဘာသာစကားကနေ ခြေရာခံရတယ် ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေဟာ Chittagongnian နွယ်ဝင် ဘာသာစကားပြောတာ ဘင်္ဂါလီနွယ်တွေမို့ပဲ လိမ်လို့မရပါ။ အရှင်းဆုံးကတော့ DNA စစ်ကြည့် လိုက်ပါ)။
သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေး ပညာရေး စီးပွားရေး လူတန်းစေ့ဖို့ အတွက် ရိုးရိုးသားသား တောင်းဆိုကြပါ ကျွန်တော်တို့ အတိအလင်း လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်မျိုးလုံးဟာ တိုင်းရင်းသားပါဆိုပြီး နိုင်ငံရေးအရ လူဝါးဝတာကို မထောက်ခံကြပါနဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အထူးသဖြင့် ရခိုင်တိုင်းသားတွေရဲ့ နစ်နာမှုကိုလဲ ထည့်တွက်ကြပါ။ သူတို့ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် ပိုင်ဆိုင် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ နယ်မြေထဲက ကြီးမားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို လူမျိုးခြားတွေအတွက် ဖယ်ပေးလိုက် ရတာနဲ့တင် ရခိုင်သားတွေမှာ လူမှုရေး နိုင်ငံရေးအရ အများကြီး နစ်နာလှပါပြီ။ ဒီထက်ပိုပြီး လူမျိုးခြားတွေကို ရခိုင်မျိုးနွယ်အောက် သွတ်သွင်း တံဆိပ်ကပ်တာ ရခိုင် အမျိုးသားရေးကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အစော်ကားခံတာဖြစ်ပါတယ်။
အကျင့်ပျက် အစိုရ အရာရှိတွေ အကူအညီနဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေရယ်၊ ယူနန်တရုပ်တွေရယ် မြန်မာပြည်ထဲကို စိမ့်ဝင်နေကြတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းမရတဲ့ မျက်ဝါးထင်ထင် ကိစ္စပဲ။ မှတ်ပုံတင်မရှိ သန်းခေါင်စာရင်းမရှိတဲ့ ဘင်္ဂါလီစကားလဲ ပြောကြ၊ ဘင်္ဂါလီသွင်ပြင် လက္ခဏာလဲ ရှိကြတဲ့ ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဘင်္ဂလားက ဘင်္ဂါလီတွေ ဘယ်လောက်ရာနှုန်း ပါဝင်နေမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူပြောနိုင်လဲ၊ ရိုဟင်ဂျာဟာ တိုင်းရင်းသားပါလို့ လက်ခံလိုက်ရင် ကလေးကော ခွေးကောကအစ နိုင်ငံသား ပြုပေးရတော့မယ်။ အဲတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဘင်္ဂါလီတွေ ဘယ်လောက် ပါဝင်လာမယ်ဆိုတာ တွေးမိကြပါလား။
အခုကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ဖြစ်နေတဲ့ပြသနာက အမှန်တကယ် လူတန်းမစေ့ နစ်နာနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေ ဆီက လာတာမဟုတ်ဘူး ပြည်ပရောက် ရေပေါ်ဆီတွေဆီက လာနေတာ.. ၎င်းတို့ ကိုယ်ကျိုး စီးပွားအတွက် ပြသနာကို ပိုမိုခက်ခဲအောင် လုပ်နေတာ... ၎င်းတို့အနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ် တကယ်စေတနာရှိရင် ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက် လူသားခြင်း စာနာတဲ့ အကူအညီတွေ ရရှိရေး အတွက်သာ ပထမဦးစားပေး တောင်းဆိုသင့်တယ်.. ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ လူအခွင့်အရေးအတွက် ရိုဟင်ဂျာတွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်ခံရမယ်ဆိုတာ မရောင်ရာ ဆီလူးတာပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူအခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေတာ ရိုဟင်ဂျာတွေချည်းပဲမဟုတ်ဘူး.. နိုင်ငံသားစစ်စစ်တွေလဲမှာလဲ ဆုံးရှုံးနေတာပဲ။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ နယ်တွေဘက်ကို ဆင်းကြည့်ပါ ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ ကျန်းမာရေး ပညာရေး ချို့တဲ့မှုတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေ ခံနေရတာထက် မနိမ့်ဘူး.. ရိုဟင်ဂျာတွေကို တိုင်းရင်းသား အဖြစ် လက်ခံ နိုင်ငံသားပြုပေးရုံနဲ့လည်း သူတို့ပြသနာတွေ အားလုံး ပြေလည်မသွားနိုင်ဘူး။
လူ့ခွင့်အရေးဆိုတာ တစ်ခုပဲပြောချင်တဲ့သူတွေ သေသေချာချာ စဉ်းစားပါ။ ရိုးရိုးသားသား လူအခွင့်အရေး ဆိုတဲ့ဘက်က ရပ်တည်သူတွေကို လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရိုဟင်ဂျာရဲ့လူအခွင့်အရေးနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသားပြုရေးဟာ များစွာကွာခြားတယ်ဆိုတာ သတိထားပါ။ လူအခွင့်အရေးဟေ့ဆိုတာနဲ့ ဘာမှမစဉ်းစားပဲ မဆိုင်မဆိုင် ရိုဟင်ဂျာတွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်ခံပေးလိုက်ရရင် နောက်ဆက်တွဲ ဘာပြသနာတွေ ဖြစ်လာ နိုင်တယ်ဆိုတာ စဉ်းစားကြပါ။ အကျိုးဆက်အဖြစ် မူလဒေသခံရခိုင်နဲ့ ကျူးကျော်သူ ရိုဟင်ဂျာ တွေကြားမှာ လူမှုရေးပြသနာတွေ ရှိလာမှ အသေအခြာပဲ။ အဆုံးမသတ်နိုင်တဲ့ သွေးချောင်းစီး သတ်ပွဲတွေ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူအာမခံနိုင်ပါမည်လဲ။
အနှစ်ချုပ်ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေရဲ့ လူသားဖြစ်တည်မှုကို လက်ခံတယ်၊ သူတို့အား လူသားခြင်းစာနာတဲ့ အကူအညီပေးမှုတွေကို လက်ခံတယ်။ သူတို့ကို နှိမ့်ချချိုးနှိမ် ဖိနှိပ်ထားဖို့ လိုလားနေကြတာ မဟုတ်ဘူး။ ၎င်းတို့အခွင့်အရေးကို သင့်တင့်သောနည်းနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန်တောင်းဆိုလျှင် ဆန့်ကျင်စရာ မရှိ။ နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ အရည်အချင်း ပြည့်မီပြီး နိုင်ငံတော်အပေါ် သစ္စာစောင့်သိမည့် သူများအား နိုင်ငံသားပြုရေးကို လက်ခံတယ်။ သို့သော်လည်း ပြသနာကို အဖြေရှာခြင်း မဟုတ်ဘဲ ပိုမိုခက်ခဲအောင် လုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာအား မြန်မာတိုင်းရင်းသား ပြုရေး (တစ်နည်းအားဖြင့် ဘင်္ဂါလီများအား အုံလိုက်ကျင်းလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားပြုပြီး နယ်မြေ ခွဲဝေပေးရေး) ဆိုတဲ့ ရိုးသားမှုလုံးဝမရှိ အလိမ်အညာတွေ ပြည့်နေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်ရှုံ့ချပါတယ်။
By Yarzar Yeni FaceBook:
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 3:20 PM
ရခိုင်တွေကို လက်နက်တွေတပ်ဆင်ပေးလိုက်ကြပါလား....ရခိုင်ကိုယ်ပိုင်တပ်ဖွဲ့ တွေတည်ထောင်ကြပါ ..ကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုယ်စောင့်ရှောက်ကြပါ.ကျွန်တော်တို့လည်း.တတ်အားသမျှထောက်ပံ့ပါမယ်..ဒီဟာက ကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုယ် လက်နက်ကိုင်စောင်ရှောက်မှပြေလည်မယ်လို့ ပဲယူဆပါတယ်
အဲဒီ့ကောင်တွေဟာ အဲလိုပဲ ခေါင်းလေးဝင်ပါရစေအုံး .. -င်လေး ၀င်ပါရစေအုံး... ဆိုပီး.. အပြီးသတ်ရင်.. ရသမျှဝါးမျိုချင်နေတာ... လီဆယ်ပြောတဲ့နေရာမှာလဲ... ကုလားမူ မူ တာ.. ကုလားချွဲ ချွဲတာလဲသူဒို့ပဲ... မြန်မာ့မြေ ကိုတော့ အပါမခံနိုင်ဘူး..ဟေ့.. နတ်သမီးမြန်မာ့မြေပုံကို တော့ အမဲ မခံနိုင်ဘူး... ငါတို့တိုင်းရင်းသားလဲမဟုတ်ဘူး... နင်တို့ အမျိုးအနွယ်တိုင်းပြည်ကိုပဲနင်တို့.. ခိုကြပါ... ရန်ကုန်မှာလဲ.. မြို့ထဲ နေရာကောင်းမှန်သမျှက.. ဒင်းတို့ပဲ..မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်နဲ့ ဗိုလ်တထောင်ဆို.. ကုလားတိုင်းပြည်လားအောက်မေ့ရတရ်... ထားပါ..ဒါကတော့... ဒို့တွေအားလုံးရဲ့ စိတ်ထားကတော့ .. တသမတ်ထဲပဲ လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဟေ့...
No!!! We cannot accept them who are prone to be dangerous for our society. Danger ... Danger... Danger... Our nations, all watch out!!! Our nations, be united, be strong!!!
တောကြောင်တွေ လက်ခမောင်းခတ်တာ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူတွေ အသုံးမကျခဲ့လို့ ၊ အတ္တများနေခဲ့ကြလို့ပါ။
အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး၊ ဘာသာ သာသနာပြန့်ပွားရေး ပိုလုပ်ကြပါ။ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ် လူမျိုးချစ်စိတ်(ကိုယ့်အမျိုးချည်းပဲမဟုတ်)ပြင်းထန်ကြစေချင်တယ်။